Idi China HRC65 acha anụnụ anụnụ nano mkpuchi Tungsten Carbide Corner Radius Ọgwụgwụ Mills Metal Na-arụ ọrụ igbutu ngwaọrụ Nrụpụta na Factory |Cheng
HRC65 nano mkpuchi na-acha anụnụ anụnụ Tungsten Carbide Corner Radius End Mills Metal na-arụ ọrụ igbutu ngwaọrụ.
Tungsten Carbide Corner Radius End Mills bụ ngwá ọrụ nwere otu njedebe nke eji eme radii nkuku na ala nke ubu igwe.… Nkuku redio ọgwụgwụ igwe ihe cutters nwere ike-egwe ọka onu ka square ewepụghị ọgwụgwụ igwe ihe igwe, otú ndepụta udu nwere ike mụbara na-enye ogologo ngwá ọrụ ndụ ka ukwuu arụpụtaghị ihe.
Ahịa: exw 8.8usd/pc-9.8usd/pc (dị iche iche ego dị iche iche ego)
Tungsten Carbide Corner Radius End Mills bụ ngwá ọrụ nwere otu njedebe nke eji eme radii nkuku na ala nke ubu igwe.... Nkuku radius ọgwụgwụ igwe ihe cutters nwere ike-egwe ọka ọnụ karịa square flat ọgwụgwụ igwe ihe, otú ndepụta udu nwere ike ụba na-enye ogologo ngwá ọrụ ndụ na ukwuu arụpụtaghị ihe.
CY's Tungsten Carbide Corner Radius end mills sitere na dayameta 1.0mm-20mm ọkọlọtọ na ndị na-abụghị ọkọlọtọ. Na-emekarị ọjà nke radius nkuku bụ 2 flutes, 3 flutes na 4 flutes. Ogologo akụkụ radius njedebe na-esi na 50L ruo 100L. Pụrụ iche. CY nwekwara ike rụpụta radius nkuku dabere n'ihe ị chọrọ.
HRC65 nkuku radicus ngwụcha igwe ihe nkọwa
1.CY's corner radius end mills mmepụta nwere ọmarịcha R&D otu na ọkachamara teknụzụ nkwado otu:
Robots Nachi na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa, ndị ọrụ afọ 10 na-arụ ọrụ na-enyere aka chengye akụkụ radius end mills mbupụ na India, Vietnam, russia.etc.
Na ngwá ọrụ igwe na-ebubata, site na 0 ruo 1, a ga-achọpụta usoro ọ bụla. A ga-echekwa ihe ọ bụla nke njedebe CY n'ụlọ nkwakọba ihe mgbe ịlelechara.
1.One nkuku radius njedebe njedebe na ọkpọkọ plastik, agba agba nwere ike ịhọrọ ndị na-azụ ahịa njedebe.
A: CY bụ akara anyị, CY dị mkpụmkpụ nke Cheng Ye Co., Ltd.
A: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, tumadi dị na Neijiang, Sichuan Province, China.
A: Ee, anyị nwere ike, mana ọ bụghị n'efu.Standard nkọwa si nkuku radius ọgwụgwụ igwe ihe MOQ bụ 1 ibe, na-abụghị ọkọlọtọ nkọwa si ọgwụgwụ MOQ bụ 3 ibe.
A: Ee, anyị nwere ike.Cheng Ye co., Ltd. nwere ike ime OEM maka nkuku radius endmills.
Nke gara aga: HRC55 2 ọjà China AlTiN ọla kọpa mkpuchi bọọlụ imi ọgwụgwụ igwe ihe
Osote: Ọjà 3 siri ike Carbide Aluminom Ọgwụgwụ Mill dị iche iche mkpuchi
acha anụnụ anụnụ nano ọgwụgwụ igwe
Ụlọ ihe nkiri Carbide End
Igwe ihe ngwucha
Hrc65 blue akuku radius ọgwụgwụ igwe ihe
HRC65 carbide nkuku radius ngwụcha igwe ihe
HRC65 nkuku radius ngwụcha igwe ihe
HRC65 igwe ihe igwe
Onye naegbu nri China Ball End Mill China Milling Cutter Ngwa lathes Ngwá ọrụ Carbide Carbide Burrs